Famerenana metaly posy - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Ny vokatra vita amin'ny metaly
Ny Filan-kevitry ny morontsiraka afovoany dia manangona sy manodina metaly simba 5,000 taonina isan-taona. Ny Scrap Metal dia ekena amin'ny Ny trano fako ao amin'ny filankevitra maimaim-poana. Recycle 100% daholo ny vy rehetra entina any amin'ny trano.
Ny entana ekena dia ahitana vatana fiara (fa tsy LPG), microwave, milina fanasan-damba, fanamainana, vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana, fanasan-damba, bisikileta, bbqs, trampoline, vata fampangatsiahana, kodiaran'ny fiara eo amin'ny sisiny (efatra fara-fahakeliny) ary ny vokatra hafa rehetra misy metaly.
Angonin'ny Council ihany koa ireo entana ireo eo amin'ny sisin-dalanao (afa-tsy ny kodiarana amin'ny rims izay tsy ekena amin'ity serivisy ity), amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo enina (6) maimaim-poana anananao. fanangonana amoron-dalana isan-taona. Ny vy potika dia alaina avy amin'ny tendrony ho an'ny fanodinana, raha azo atao.